Tariikhda Imaam Tirmidi ilahay ha unaxariste – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Taariikhdii Imaam Tirmidi
Magaciisa iyo Nasabkiisa
Abuu Ciise Maxamed bin Ciisa bin Sowrah bin Muuse bin Dhaxaak Asulami Atirmidi.
Wuxuu dhashay casrigii dahabiga ahaa qarnigii sadexaad ee hijriga waa xiligii inta badan la qoray sunada Rasuulka (sallalaahu calayhi wasallam). Sidoo kale waa xiligii ay soo shaac baxday qorista kutubta loo yaqaano (كتب الصحاح )Kutubtaasoo uu ku jiro kitaabka uu qoray imaamka ee la yiraahdo “جامع الترمذي” .
Imaamku wuxuu dhashay Dilxijjah sanadkuu markuu ahaa 209H ,wuxuuna ku dhashay tuulo kamid ah magaalada Tirmid oo laguna magacaabo “بوغ” , kuna taal wadanka hada loo yaqaan Uzbekistan ee marka la eego juquraafi ahaan u dhow dalka Afganistan .
Wuxuu ku dhashay imaamku dhulkii ay kasoo jeedeen culimadii xadiithka ku caan baxay sida: Imaam Bukhaari iyo imaam Muslim.
Awoowgiis wuxuu asal ahaan ka soo jeeday magaalada Marwu oo hadda kamid ah dalka Turkuminstaan, balse waxay markii danbe u guureen magaalada Tirmid halkaas oo uu ku dhashay imaamku noloshiisa bilowgeediina ku qaatay.
Dadaalkiisii cilmi doonka
Imaamku wuxuu ahaa mid cilmiga aad u jecel wuxuu u dhoofi jiray oo uu dhulal badana u maray siduu cilmiga xadiithka u baran lahaa wuxuu ku bilaabay barashada cilmiga yaraan. Wuxuu la fariistay in badan culimada si uu uga qaato cilmigooda kala duwan, wuxuu ahaa imaamku mid fahmad badan leh, xifdigiisuna aad u sareeyo.
Imaam Tirmidi wuxu u qalab qaatay doonista cilmiga isagoo raacaya xadiiskii Rasuulka scw
من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقاً الى الجنة
Sida caadada culimada rabaaniyiinta u ahaydba wuxuu bilaabay inuu cilmiga raadiyo in badana u safro meelo fogna u tago. Imaamku wuxuu ka dhagaystay cilmiga culimadii Ciraaq , Khurasaan ,Xijaaz , iyo kuwo kaleba . Xifdgiisa waxaa la sheegaa inuu aad u sareeyay , waxaa la yidhi axaadiista waxuu durba ku xifidi jiray muddo yar kadibna waxuu dalban jirey in loo sii kordhiyo si looga dhagaysto isagoon hal xarafna qaldin.
Imaamku wuxuu kamid yahay Culimada la isku haleeyo axaadiistooda, kuwaas oo lagu naanyso “Asxaabu siitah”. Waxayna kala yihiin: Bukhaari ,Muslim, Abuu Daauud, Nisaa’i. iyo Ibnu Maajah.
Quteybah binu Saciid
Maxamed Binu Bashaar
Maxamed bin Almuthana
Ziyaad binu Yaxye al Xasaanni
Yacquub binu Ibrahim
Abuu Saciid al Ashax
Nasr bin Cali Aljahdami
Camr ibn Cali Alqalansi
Cabaas binu Cabdulcadiim
Isxaaq ibn Raahawiya iyo kuwa kaloo badan.
Amaantii culimada ee ay ka dhaheen imaam Tirmidi
Ibnu athiir wuxuu yiri Imaam tirmidi wuxu ahaa imaam xaafid ah lehna kutub badan waxana ka mida kutubtiisa kitaabka la yiraahdo (الجامع الكبير) , kaasoo ah kutubta kan ugu wanaagsan .
Sidoo kale Ibnu Cimaad Alxanbali wuxu yidhi Tirmidi waxuu ahaa mid ka soo dhex muuqda asxaabtiisa wuxuuna ahaa aayad xaga xifdiga iyo itqaanka
Almizi wuxu yiri isagoo ka waramaya imaam tirmidi wuxu ahaa imaamyada xifdiga looga danbeeyo Ilaahayna ku anfacay muslimiinta .
Assamcaani wuxu yiri wuxu ahaa imaam Tirmidi imaamkii casrigiisii cidna kula tartamayn .
Imaam Alxaakim waxuu yidhi , waxan ka maqlay Cumar bin Cali oo leh waxaa dhintay Bukhaari ugamana uusan tagin Khurasaan qof la mida Abii ciisa xaga cilmiga ,xifdiga , xalaalmiirashada iyo zuhdiga .
Kutubtuu Alifay Imaam tirmidi
الجامع لسنن, سنن الترمذي – waa kitaabkii ugu horeeyay ee uu alifo imaamku oo kuna soo caanbaxay, isaga dartiina loogu naaneysay (imaam )
Isagoo ka sheekaynaya imaamku kitaabkiisaan wuxu yiri waxan u soo bandhigay culimadii xijaaz. Ciraaq iyo Khurasaanba wayna ka raali noqdeen . Wuxuu kaloo yiri qofkii uu gurigiisu yaalo kitaabkaan waaba isagii oo Nabigu scw la hadlayo!
Iyo qaar kale
Geeridii Imaam Tirmidi
Wuxuu ku dhintay Imaam Tirmidi magaaladisii Bowq bishii Rajab sanadkii 279H, kadib markuu nolol ka buuxda cilmi iyo camal ku sagootiyay intii ka harsanayd noloshiisa . Imaamku wuu indho beelay dhamaadkii noloshiisa. Culimada qaarna waxay sheegaan inuu oohintiisii badneyd darteed uu la indho beelay
Imaamku noloshiisa intii badnayd wuxuu ku dhameystay baridda cilmiga, dhagaysigiisa iyo qorida kutubtan laga dhaxlay
Allah haw naxariisto Imaam Tirmidi naxariis balaadhan aamin.